I-DNA tattoos: zithetha ntoni kunye neengcamango zokukukhuthaza | Ukwenza umvambo
Iitattoos zeDNA: zithetha ukuthini kunye nemibono yokukukhuthaza
Nat Cherry | | Iitatto ezinemilo
Ukuba kukho into enye esinokuqiniseka ngayo, kukuba i-tattoos ye-DNA ipholile kakhulu. Eyoqobo kunye nesayensi kunye nochuku lwangoku, zilungile kwabo bafuna uyilo oluthe nkqo, nokuba kumnyama nomhlophe okanye umbala, kwaye nabo bafuna into eguqukayo.
Ngaba ufuna ngaphezulu? I-DNA tattoos inentsingiselo engalindelekanga. Ukuba ufuna ukwazi ukuba yintoni na, kuya kufuneka uqhubeke ufunda, ukongeza, siya kuthetha malunga nendlela yokuthatha inzuzo kubo, phakathi kwezinye izinto ezininzi. Kwaye, ukuba unomdla kwisayensi, jonga kwelinye inqaku izinto ezinomdla kwiitattoos, isayensi kunye ne-inki.
1 Intsingiselo yeetattoos zeDNA
1.1 Sivela phi
1.2 Isayensi yokuphila ixesha elide
1.3 Ukonwabela ngokupheleleyo
2 Iingcamango kunye nendlela yokuthatha inzuzo ye-DNA tattoos
2.1 Ithe tye okanye ithe nkqo
2.2 Umnyama nomhlophe okanye umnxeba wombala
2.3 Wedwa okanye uhamba
2.4 Ii tattoos ezincinci zeDNA
2.5 Umvambo olungileyo
3 Iifoto ze-DNA tattoos
Intsingiselo yeetattoos zeDNA
Intsingiselo ye tattoos ebonisa i-DNA ihambelana ngokusondeleyo nento eyi-DNA: akukho nto kwaye akukho nto ingaphantsi ikhonkco eliphindwe kabini le-helix elenza ukuba sibe ngubani kwaye lisivumela ukuba siqhubeke sikhula. Emva kokuba oku kwaziwa, ucinga ukuba le tattoo ingathetha ntoni?
Kulula kakhulu: enye yeentsingiselo zeDNA kukukhumbula bonke ookhokho bethu, ekubeni iDNA inokugqalwa njengetyathanga elinceda ekulawuleni inkcazelo yemfuza, oko kukuthi, yonke into, elungileyo nembi, esisabelana ngayo nentsapho yethu. Ke ngoko, nangona ekuqalekeni kungabonakali ngathi, olu hlobo lwe tattoo lusebenza kakuhle njengoyilo lwentsapho. Indlela yokuqala yokubonisa uxhulumaniso lwakho kwintsapho yakho, umzekelo, ngokubeka ii-initials zakho kwiincinci zeDNA.
Isayensi yokuphila ixesha elide
Ukongeza, i-DNA, ngokwemvelo, inxulumene nesayensi kunye nayo yonke into yesayensiKungoko sisizathu esiqhele ukukhatshwa ngumfuziselo ongakholelwayo kubukho bukaThixo, odanduluka ehlabathini ukuba ukholo lwakho alufumaneki kwinto enentshebe evela emajukujukwini, kodwa kulwazi lokuba, ngokuthe ngcembe, uhlanga loluntu luya kuqonda. . .
Enye yeentsingiselo ezinokwenzeka kukuba i-DNA ibonisa into yokuzonwabisa oye wadibanisa kwisiqu sakho, esiyinxalenye yakho. Ngokuba, kuyinto eqhelekileyo ukuba olu yilo lukhatshwe yenye into. Ngokomzekelo, ukuba uyathanda ukudlala ipiyano, unokudibanisa ikhonkco leDNA kunye nomculo owuthandayo okanye nomfanekiso wesixhobo. Okanye, njengasesithombeni, ukuba uzithanda ngokwenene iibhayisekile ungade ujike iDNA ibe yityathanga lebhayisekile.
Iingcamango kunye nendlela yokuthatha inzuzo ye-DNA tattoos
Zininzi iindlela zokuthatha ithuba kwezi ntlobo ze tattoos, ekubeni bazinikela kakhulu kwaye, ngaphezu koko, bakhangeleka kwiindlela ezininzi ezahlukeneyo. Umzekelo:
Ithe tye okanye ithe nkqo
Omnye wemibuzo yokuqala oya kuthi ngokuqinisekileyo uzibuze yona kukuba ukhetha uyilo oluthe nkqo okanye oluthe tye. Oku kunokuqinisekiswa ngokulula ukuba sele uyazi ngokuqinisekileyo apho ufuna ukwenza tattoo. Umzekelo, emlenzeni okanye kwiimbambo uyilo olukhulu kunye noluthe nkqo luya kuba ngcono, ngelixa kwi-nape kuya kufuneka ukuba ithe nkqo kodwa ibencinci kancinci (ngaphandle kokuba igubungela wonke umva). Kwimeko ye tattoos ethe tyaba, zibukeka zikhulu kwingalo, ingalo okanye imilenze, nakwindlela yomda.
Umnyama nomhlophe okanye umnxeba wombala
Into entle ngeDNA kukuba, njengoko besitshilo, ibonakala ilungile kwiindlela ezininzi, ukwenzela ukuba isigqibo siphinde sinqunywe yintsingiselo kunye nobukhulu beqhekeza oyifunayo. Umnyama nomhlophe, kunye ne-shading efanelekileyo, unokwenza ukuba yonke idizayini ibonakale ngobunzima obukhulu, ngelixa umbala uya kunika isitayela esingaqhelekanga. Kwanemibala oyikhethayo inokugqiba ukuba ukhetha ukhetho olunye okanye olunye: umzekelo, imibala eyonwabileyo, enjengomthubi okanye ipinki, iya kuhambisa amandla kunye novuyo.
Wedwa okanye uhamba
Ngaphambi kokuba siphinde sitsho I-tattoos ye-DNA inokuba yodwa okanye ihambe kunye nento ethile. Kule meko yesibini, njengoko kubonakala, siya kufuna isiqwenga esikhulu ukwenzela ukuba uyilo lungabonakali lugcwele kwaye lukhohlisayo. Ukuba uyilo lobungakanani obukhulu, ikwaxhasa imidlalo emininzi, umzekelo, umthi we-DNA uya kuhambisa umbono wembeko kookhokho bakho ngelixa uvumela uyilo olunamasebe, imibala kunye neenkcukacha ezininzi.
Ii tattoos ezincinci zeDNA
Kuthekani ukuba sifuna uyilo oluncinci? Akhongxaki, I-DNA ibonakala ilungile kuyilo oluninzi olungachazwanga. Kule meko, ungadlala ngombala (nangona ungekho baninzi okanye uhluke kakhulu, ukuze ungalahlekisi) kunye ne-dynamism. Enyanisweni, i-DNA inokuchazwa ngokulula, ngokungathi yenziwe ngepensile, ukuze kubonakale ngathi iyashukuma.
Ngokubhekiselele kwezona tattoos zintle kwaye zibuthathaka, iDNA nayo ipholile kakhulu. Kule meko, kukulungele ukufumana indawo apho uyilo luhambelana ngokwemvelo (njengesandla, i-forearm, intamo ...) kwaye, ngokucacileyo, sebenzisa imigca emihle kakhulu, kunye nolwandlalo olucacileyo kodwa oluqinileyo kunye noluncinci kwaye ngaphandle komthunzi. Xa kuziwa kumbala, isuntswana lesitayile se-watercolor sinokuba sihle, nangona umnyama uya kongeza ngakumbi imvakalelo yokulula.
Iitattoos zeDNA ziyamangalisa, kodwa zineentsingiselo ezininzi ezahlukeneyo nezingalindelekanga eziya kukushiya ubambe ongezantsi. Sixelele, ngaba unawo umvambo ofanayo? Ithetha ntoni kuwe? Ucinga ukuba kukho into esishiye ilindile, njengentsingiselo okanye ingcamango?
Iifoto ze-DNA tattoos
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitatto ezinemilo » Iitattoos zeDNA: zithetha ukuthini kunye nemibono yokukukhuthaza
Iitattoos zomkhosi: ezona mbono zibalaseleyo kunye neentsingiselo
I-Motocross tattoos kubathandi balo mdlalo: iingcamango kunye neentsingiselo